Maxaabiis ugeeriyootay cabsi laga qabo Caabuga Corono-virus – Banaadir Times
Maxaabiis ugeeriyootay cabsi laga qabo Caabuga Corono-virus
By banaadir 23rd March 2020 219
Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhimatay mid kamid ah xabsiyada ugu weyn dalka Colombia, kaddib markii ay dhacday wax ay mas’uuliyiinta ku tilmaameen isku day baxsasho oo ay sameeyeen qaar kamid ah maxaabiista, kuwaas oo ka cabsi qabay xanuuka corona.
Wasiirka cadaaladda ee dalka Colmbia, Margarita Cabello ayaa sheegtay in sidoo kale isku daygan ay ku dhaawacmeen 83 maxaabiis ah. Waxay intaa raacisay in ay ku guda jiraan baaritaan ku aadan arrintaas.
Mar wax laga weydiiyay in ay aad u liidato xaaladda caafimmaad ee xabsiga maadaama laga cabsi qabo xanuunka corona ayaa waxay sheegtay in aysan jirin dhibaatooyin la xiriira xanuunka corona oo keeni karta xaalad noocaas oo kale ah, waxayna ku adkeysatay in uu yahay qorshe la maleegay.
Qaar badan oo kamid ah ehelada maxaabiista ayaa isugu yimid afaafka hore ee xabsiga, kuwaas oo doonayay in ay ogadaan xaaladda ay ku sugan yihin dadkii uga xirnaa xabsiga. Waxay sheegeen in ay maqleen dhawaqa rasaasta oo kor loo riday, kaddib markii ay yimaadeen booliska.
Sida laga soo xigtay wasaaradda cadaaladda ee dalkaas, xabsiyada dalkaas oo gaaraya 132 ayaa waxaa loogu talaagalay maxaabiis dhan 81 kun, balse waxaa ku xiran 121 kun maxbuus, taas oo muujineysa in tiradii loogu talagalay ay aad uga badan tahay.
Faah-faahin:- Xildhibaan lagu dilay degmada Gaalkacyo.
Golaha Wasiirrada Oo Ansixiyay Go’aan Ay Wasaaradda Qorshayntu Ka Qaadatay Hay’adaha Caalamiga Ah
By banaadir 4th October 2018
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Ciidamo Kenyan ah ka qeyb galeen dagaalkii Beled-Xaawo.